Fihemorana Erantany: “Ny Andalam-pandrosoana, Tsodrano Iray Vonjimaika” · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Anne Lozac'h
Voadika ny 16 Aogositra 2018 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, Français, English
Milaza ireo governemanta sasany fa tsy voakasiky ny krizy ara-toekarena erantany ny firenen'izy ireo. Amin'ny ankamaroan'ny fotoana, tsy maharesy lahatra izy ireo ; ary tsy mino ny mpifidy azy ireo, amin'izay voalaza fa fihatsaràn'ny toekarena. Saingy mety milaza ny marina ny sasany amin'ireo governemanta ireo. Angamba tsy mahatoky tanteraka izy ireo amin'ny sehatra ara-toekarena tena misy eo amin'ny fireneny, saingy angamba, manana ny marina izy ireo raha toa manambara fa tsy voakitik'ilay krizim-bola atahorana ny tanin'izy ireo, ny ‘fidangan'ny vidin'ny trano‘ [amin'ny teny anglisy] sy ireo maripamantarana hafa amin'ny krizy.
Araka ny lahatsoratra tao anaty blaogin'ny Banky Iraisampirenena natokana ho an'i Azia Atsinanana dia tsy niaritra be ny krizy ara-toekarena i Laos noho ny “toekareny tsotra“
Tao anaty lahatsoratra teo aloha, notanisaiko ny toekarena laosiàna izay manamafy fa ho tafavoaka velona amin'ilay krizy i Laos noho ny toekareny miankindoha amin'ny fambolena.
Ny mpanoratra ny blaogy Yek Livan Chayeh Dagh (dite mafana iray kaopy) [amin'ny teny farsi], manipika fa i Iràna , izay tsy manana fahafahana miditra amin'ny ankamaroan'ireo tsenambola iraisam-pirenena, dia tsy dia voakitiky ny krizy ara-bola iraisam-pirenena loatra.
Manamarika i Iman Brotoseno, teratany Indonziàna [amin'ny teny bahasa] fa ny ankamaroan'ireo Indoneziana dia tsy voakasiky ny fitontongan'ny tsenambola.
Araka ny voalazan'i Tony Abaya, “fitahiana vojimaika” [amin'ny teny anglisy] ho an'ny firenena ireo tsy fahombiazan'i Filipina tao anatin'ny sehatra fizahantany sy fanondranana.
Hamid Tehrani no nandika ireo fitanisàna avy tamin'ny teny farsi. Ny fitanisàna amin'ny teny Bahasa dia nadikan'i Carolina Rumuat. Ny fitanisàna amin'ny teny Albaney nadikan'i Elena Ignatova. Ny fitanisàna amin'ny teny rosiana nadikan'i Adil Nurmakov
Fahasalamàna 19 Janoary 2021
Makedonia 14 Novambra 2020
Eoropa Andrefana 22 Jona 2020